India yeApple Zvitoro Zvingave Zvikuru Kambani | Ndinobva mac
Zvitoro zveIndia zveApple zvinogona kunge zviri zvakakurisa kambani
Isu tinoenderera mberi tichitaura nezveIndia uye mune iyi nyaya zvine chekuita nezvitoro zvitsva zveApple zviri kuzovakwa munyika ino mumwedzi inotevera. Mushure mekuona kuti kutaurirana nezviremera zveIndia kwakatora nguva yakareba kusvika pachibvumirano chinobatsira mapato ese, ikozvino yave mukana weiyo nyowani Apple zvitoro izvo zvichavhura mune ramangwana.
Nhaurirano dzinoita sedzasvika padanho apo vese vaida uye mushure menguva refu vashandisi venyika vachazove yavo yeApple Chitoro uye Izvi zvinogona kunge zviri Apple hombe pasi rose.
Kugadzirwa kweiyo iPhone SE munyika imwecheteyo kuti ugone kutengesa, kudzikiswa kwemitengo yezvigadzirwa zveApple uye zvino yave nguva yezvitoro. Sezvo isu tichigona kuverenga mukati Zvichida Apple zvitoro muNew Delhi neBangalore, zvichavhurwa neApple zvichave ne inobatsira nzvimbo inosvika chiuru chemamirimita. Aya achave ezvitoro zvikuru zveApple, zvakapetwa kunyangwe zvimwe zveizvo zvatova zvikuru nhasi.
Nezve dhizaini yezvitoro, zvinotarisirwa kuve chimwe chinhu chakafanana nezvatinoziva nhasi nezvitoro zvazvino uye kunze kwegirazi rinozotonga pamwe nesimbi. Chero zvazvingaitika basa rakaoma rekutaurirana nenyika Zvishoma nezvishoma tine nhau nyowani nerunyerekupe nezve nhanho dzinotevera dzaApple izvozvi zvaakakwanisa kuwana nekodzero dzakazara. Kuwanda kwehuwandu hwevanhu kunoreva kuti zvitoro zvinofanirwa kuve zvakapetwa kaviri uye ichi ndicho chinhu icho vakomana veCupertino zvirokwazvo vakanyatsodzidza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Rumo » Zvitoro zveIndia zveApple zvinogona kunge zviri zvakakurisa kambani
Gadzira iyo PDF pamwe nesarudzo yemapeji, muKutarisa kweMac